OLEE OTú IJI DOZIE ARỤMỤKA A NA-ATỤGHỊ ANYA YA NA EZIGHI EZI NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Iguzobe "Echeghị Nchekwa Ụlọ Ahịa Echeghị" na Windows 10
Njehie "Ụlọ Ahịa a Na-atụghị Anya Ya" anaghị adịkarị na sistemụ arụmọrụ nke Windows 10. Na-emekarị, ihe kpatara nsogbu ahụ bụ mmebi faịlụ faịlụ, diski ike ma ọ bụ ebe nchekwa, nsogbu software, ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi. Iji dozie njehie a, ịnwere ike iji ngwaọrụ ngwaọrụ.
Ichezi njehie "Ụlọ ahịa a na-atụghị anya ya" na Windows 10
Iji malite, gbalịa iwepụ usoro nke enweghị mpempe akwụkwọ. Enwere ike iji nke a rụọ ọrụ ma ọ bụ site n'enyemaka nke ụlọ ọrụ pụrụ iche. O kwesịkwara iwepụ mmemme mmemme a na-adịbeghị anya. Ha nwere ike ịbụ ihe kpatara mgbagha software. Mgbochi nje ahụ nwekwara ike ịkpata nsogbu, ya mere ọ dịkwa mma iji wepụ ya, mana ntinye ga-aga n'ihu n'ụzọ ziri ezi ka nsogbu ọhụrụ ghara ịpụta na usoro.
Ihichapu Windows 10 ahịhịa
Ngwudata ngwanrọ maka mwepụ zuru ezu nke ngwa
Wepụ antivirus site na kọmputa
Usoro 1: Nyocha System
Site n'enyemaka nke "Iwu iwu" Ị nwere ike ịlele iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro faịlụ dị mkpa, yana iweghachi ha.
Pinch Nweta + S ma dee na mpaghara ọchụchọ "Cmd".
Right pịa "Iwu iwu" ma họrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Ugbu a dee
ma malite na Tinye.
Chere maka usoro nkwenye iji mezue.
Gụkwuo: Nlele Windows 10 maka njehie
Usoro 2: Lelee diski ike
Enwere ike igosi nkwenye siri ike site "Iwu Iwu".
Gbaa ọsọ "Iwu Iwu" ya na ikike onye nchịkwa.
Detuo ma kpoo iwu ndi a:
chkdsk na: / f / r / x
Esi lelee diski diski maka ndi di nma
Esi lelee arụmọrụ diski ike
Nzọụkwụ 3: Ntọgharị ndị ọkwọ ụgbọala
Usoro nwere ike imelite ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka, ma ha nwere ike ghara itinye ma ọ bụ tinye ya na-ezighi ezi. N'okwu a, ịkwesịrị ịtinye ha ma ọ bụ melite. Mana nke mbụ i kwesiri igbanyụọ mmelite onwe. Enwere ike ime nke a na mbipụta niile nke Windows 10, ma e wezụga maka Home.
Pinch Nweta + R ma tinye
Soro ụzọ "Templates Administrative" - "Usoro" - "Ntinye Ngwaọrụ" - "Mgbochi Ntinye Ngwaọrụ"
Meghee "Machibido ntinye nke ngwaọrụ ndị akọwaghị ...".
Họrọ "Kwadoro" ma tinye ntọala ahụ.
Ugbu a ị nwere ike iweghari ma ọ bụ melite ọkwọ ụgbọala ahụ. Enwere ike ime nke a na aka ma ọ bụ site na enyemaka nke ngwaọrụ na mmemme pụrụ iche.
Software kacha mma iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Chọpụta nke ndị ọkwọ ụgbọala ga-arụnyere na kọmputa gị.
Ọ bụrụ na otu n'ime nhọrọ ahụ enyereghị aka, wee gbalịa iji "anụghachite". Lelee OS maka malware site na iji ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị. N'okwu ndị dị oke mkpa, ịkwesịrị ịtinye Windows 10. Kpọtụrụ ndị ọkachamara ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ma ọ bụ ejighị n'aka na idozi ihe onwe gị.
Hụkwa: Ịlele kọmputa gị maka nje ndị na-enweghị antivirus